(မိုးမခ) မေ ၅၊ ၂၀၁၇
စာသားများ ရွှေ့ခြင်း၊ တွန်းခြင်း
Indent လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ စာသားအစမှာ နေရာခြားထားတာ၊ စာသားတွေကြားမှာလည်း နေရာတွေ ခြားပြီး ဖော်မက်ချတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာပိုဒ်အစမှာ မာဂျင်ကနေ စပြီး ထားတာမဟုတ်ဘဲ နေရာအနည်းငယ် ခြားထားတာမျိုးကို အင်ဒန့်လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာကီးဘုတ်မှာတော့ Tab ခလုပ်က အင်ဒန့် လုပ်ပေးပါတယ်။ တက်ခုန် တယ်၊ တက်ခြားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
အပေါ်က ပုံမှာ စာပိုဒ် ၂ ခုမှာ စာသားအစကို အတွင်းထဲကို သွင်းထားတာ၊ နေရာခြားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
တက်ခုန်လိုက်ရင်တော့ စာသားကို လက်မ၀က်စာ အတွင်းကို ရွှေ့ပေးပါတယ်။ အောက်ပါ သရုပ်ဖော်ကို ကြည့်ပါ။
Press the Tab key ကို I was ရှေ့မှာ ချပြီး တက်နှိပ်ကြည့်ပါ။
Increase indent and Decrease indent shortcut buttons ကို သုံးပြီး အတွင်းရွှေ့ခြင်း၊ အပြင်ကို ထုတ်ခြင်းကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အင်ဒန့်လုပ်ချင်တဲ့ စာပိုဒ်တခုလုံးကို အရင်ရွေးပါ။
Increase indent shortcut button မီးနူးကနေ နှိပ်ပြီးတော့ အတွင်းကို တွန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ရွေးထားတဲ့ စာသားတွေ အတွင်းကို တွန်းလိုက်တာ တွေ့ရပါမယ်။ လက်မ၀က်စာ တွန်းပြီးသားပေါ့။
Decrease indent shortcut button ကို နှိပ်ပြီးတော့ မူလနေရာကို ပြန်ပြီး တွန်းလို့ ရပါတယ်။
Format menu ကို ဆွဲချပါ။ Paragraph styles ကို ဆွဲလိုက်ရင် Increase indent and Decrease indent commands တွေကို တွေ့ရပါမယ်။
အင်ဒန့်ကို အလိုရှိသလို ပြင်ဆင်ခြင်း
အင်ဒန့်အမှတ်အသား ၃ မျိုးကို three indent markers စာရိုက်တဲ့ ၀င်းဒိုးက ပေါ်နေတဲ့ Ruler မျဉ်းကနေ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကို custom indents လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လက်မ၀က် အင်ဒန့်လုပ်တာထက် လိုတိုး ပိုလျော့ စာသားတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဲသည် မတ်ကာတွေကို မျဉ်းတံပေါ်ကနေ ဆလိုက်လုပ်လိုက်ရင် စာရိုဝင်းဒိုးမျက်နှာပြင်မှာ အပြာရောင် လိုင်းလေး ဒေါင်လိုက် ပေါ်ပြီး မိမိကို ပြသပါမယ်။
First Line Indent marker: ဆိုတာက စာပိုဒ် သို့မဟုတ် စာသား၏ အစကို သတ်မှတ်တဲ့ အင်ဒန့်စအမှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။ မာဂျင်လိုင်းကို သတ်မှတ်တာပါ။ စာမျက်နှာရဲ့ ဘယ်ဘက်က မာဂျင်လိုင်းတခုလုံးကို တွန်းပြီး ရွှေ့တာပါ။
Left Indent marker: ဘယ်ညှိတဲ့ အင်ဒန့်အမှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ မာဂျင်မျဉ်းကနေ တွန်းတဲ့ အင်ဒန့်ကို သတ်မှတ်တဲ့ သဘောပါ။
Right Indent marker: ညာညှိတဲ့ အင်ဒန့်အမှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာရဲ့ ညာဖက် အဆုံးမှာ ညာဘက်မာဂျင်ကနေ အတွင်းကို ပြန်တွန်းပြီး စာသားတွေကို ဖော်မက်ချတဲ့ဆီမှာ သုံးပါတယ်။
To customize indents with the Ruler:
စာမျက်နှာ ပေတံမျဉ်းကနေ အင်ဒန့်များကို ကစားခြင်း
မောက်စ်နဲ့ မိမိ တွန်းချင်တဲ့ စာသား၊ စာပိုဒ်များကို ရွေးပါ
အင်ဒန့်မတ်ကာ ၃ ခုထဲက မိမိ အလိုရှိရာ အင်ဒန့်ကို ရွေးပြီး ရွှေ့ပါ။
ပြီးတော့ မောက်စ်ကို လွှတ်ပါ။
Right Indent marker ကိုလည်း စာပိုဒ်တခုကို ရွေးပြီး ရွှေ့ကြည့်ပါ။
နောက်သုံးနည်းတခုကတော့ tab stops ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စာသားတွေကို တွန်းတဲ့ ရွှေ့တဲ့ဆီမှာ ပိုပြီး ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သာမန် တက်ဘ် ဆိုတာက မိမိစာသားကို လက်မ၀က်သာ တက်ဘ် ခုန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာက မျဉ်းတံ (RULER) မှာ TAB STOPS တွေ တပ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင် တက်ဘ် မျိုးစုံ အများကြီး ထားလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ စာပိုဒ်မှာ ဘယ်ညှိထားတာရယ်၊ နေရာခြားတာ (ကော်လံခွဲသလိုမျိုး) စာသားတွေ ညီအောင် တွန်းထားတာရယ် tab အမျိူးမျိုး ခွဲသုံးတာပေါ့။
တက်ဘ်စတော့ ၃ မျိုး ရှိပါတယ်။
Left tab stop: ဘယ်ညှိပေးတဲ့ တက်ဘ်စတော့
Center tab stop: အလယ်ညှိပေးတဲ့ တက်ဘ်စတော့ (အလယ်ညှိတယ်ဆိုတာက တက်ဘ်ခုန်လိုက်တဲ့ စာသားတွေက စာကြောင်းအချင်းချင်းမှာ center allign ဖြစ်နေတာပါ)
Right tab stop: ညာဘက်ကိုပဲ ညှိပေးတဲ့ တက်ဘ်စတော့
ဒီအတိုင်း တက်ဘ်ခုန်လိုက်ရင် first line indent ကို သုံးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမလိုင်းက ပထမစာသားကို တွန်းခြင်း ရွေ့ခြင်းပါ။ နောက် စာကြောင်းကြားထဲက စာသားတွေကို တက်ဘ်ခုန်တာကို ပုံစံပြောင်းတာမှာ tab stop ကိုသုံးပြီး စာသားအတွင်း ဘယ်၊ ညာ၊ အလယ် ညှိ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းဆရာက ပုံစံပြပြီး ရှင်းရပါမယ်။
တက်စတော့ကို စမ်းကြပါစို့ …
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စာသားတွေ စာပိုဒ်တွေကို ရွေးပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် tab stop တွေကို ruler မှာ ထည့်ကြည့်ကြပါမယ်။ စာသားအတွင်း ဘယ်ညှိတဲ့ အင်ဒန့်ကို ထည့်ပါတယ်။ ဒါက first indent marker နဲ့ မတူဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ရပါမယ်။ ကိုယ်ဖော်မက်ချချင်တဲ့ စာသား စာပိုဒ်ကို မရွေးခဲ့ရင် စာမျက်နှာ ဒေ့ါကူးမင့်တခုလုံးကို tab stoper တွေက ၀င်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုတော့ သတိပြုပါ။
Ruler ပေါ်မှာ အောက်ပုံအတိုင်း မိမိ တက်ဘက်စတော့ ထားချင်တဲ့ နေရာမှာ မောက်စ်ကို ထား၊ ပြီးတော့ ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ။ drop down menu တခု ကျလာမယ်။ အဲသည်မှာ Add left tab-stop ကို ရွေးပါ။
အခုဆိုရင်တော့ left tab-stop ကို ရွေးတယ်ပေါ့။
ပြီးရင် မိမိရွေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ကို ပြန်သွားပါ။ ခုနင်က အထဲက ခုနှစ် သက္ကရာဇ် စာသားတွေအစမှာ မောက်စ်ကို ချပြီး တက်ဘ် ခုန်ကြည့်ပါ။ တက်စတော့ချထားတဲ့ဆီကို စာသားတွေ ခုန်သွား ရွေ့သွားမယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်ညှိထားပြီးသားလည်း ဖြစ်သွားမယ်။ left tab-stop လုပ်ထားတာကိုး။
ပြထားတဲ့အတိုင်း ခုနှစ်တွေကို ရွေ့ကြည့်ပါ။ စမ်းချင်ရင် အဲသည်နေရာကို အခြား အလယ်ညှိ၊ ညာညှိ တက်ဘ်စတေ့ာ ပြောင်းကြည့််ပါ။
တက်ဘ်စတော့တွေကို ဖြုတ်ပစ်ချင်ရင် ruler ပေါ်က အမှတ်လေးကို အပြင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။ ပျောက်သွားပါမယ်။
အောက်ပါ စာသားများကို ကူးပါ။ မိမိ နယူးဒေါ့ထဲကို ကော်ပီအင်ပေ့စ်လုပ်ပေါ့။
Contra Costa Boutique
I was excited to find the Retail Manager position for Contra Costa Boutique listed on Craigslist. I am familiar with your boutique because I have beenaclient since 2003, from the day Contra Costa opened its doors.
Both asapatron and retail professional, I am continually impressed by the quality of your merchandise, the appearance of your store, and your commitment to providing exceptional customer service. Because Contra Costa was recently named Best Local Women’s Boutique by the Independent Weekly, I understand your need for an experienced Retail Manager is greater than ever.
Not only do I have the experience you’re looking for, but also the passion, vision, and determination required to improve sales, boost customer loyalty, and increase visibility in the local community. I am proficient in every aspect of boutique management, including purchasing, merchandising, sales, and staff management.
Awarded Associate of the Year (2004) and five-time Associate of the Month for sales volume that was consistently 25-35% above average.
Successfully set up and merchandised Designer Women’s Wear at new store inaneighboring city, with $100,000+ in clothing sales on opening day.
Based on my experience and strong commitment to doing more than is required, I know I can deliver similar results for Contra Costa Boutique. I have enclosed my resume to provide more information on my strengths and career achievements. I look forward to speaking with you soon. Thank you for your time and consideration.
1088 Highland Ave
Experienced retail manager with proven proficiency in all aspects of boutique management. Cutting-edge merchandiser with expert ability in combining innovative display techniques with visual standards & sales strategies in order to achieve optimal retail success.
Retail Manager, Bella’s Boutique
Implement business goals and manage all aspects ofaboutique store that specializes in high-end women’s wear with an emphasis on ultra-feminine and European lines.
Utilize fashion expertise to select and order merchandise that will appeal to our clients.
Handle all purchasing and receiving by building ongoing relationships with international
Managerial duties for staff of seven, including:
Create and maintain database used to track inventory and produce customer, vendor
and sales reports.
Apply visual talent to create elegant and eye-catching merchandising and store design.
August 2001 - April 2004
Utilized visual display talent onaweekly basis as the Primary Merchandiser for the Designer Women's Wear department.
Awarded Associate of the Year, 2000 and five-time Associate of the Month for sales volume that was consistently 25-35% above average.
Coordinated bi-annual trunk shows to premiere new collections which included marketing and detailed event planning.
Participated in ongoing professional development in fashion by having attended quarterly clinics for incoming fashion lines.
Collaborated with tailors and seamstresses for custom fittings and alterations.
Scheduled and conducted exclusive shopping opportunities for high-end customers.
Sales Associate, BCBG
February 1999 - August 2000
Provided exemplary customer service by listening to customer desires and building ongoing relationships. Consistently exceeded sales goals by 15-20%.
Maintained merchandising standards as dictated by seasonal themes and showcases.
Microsoft Office Specialist - Microsoft Office 2016
Microsoft Certification 2016
Georgia State University - Atlanta, GA 2000-2002
Associate Degree - Merchandising
Valencia College - Orlando, FL 1997-1999
UPC Inventory Tracking Systems.
Summary လို့ ပြနေတဲ့ စာမျက်နှာကို သွားပါ။
စာပိုဒ်တခုလုံးကို ရွေးပါ။ Press the Tab key လုပ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း အင်ဒန့် လုပ်ပါ.
ဒီလို ပေါ်လာအောင် လုပ်ပါ။
Education section ကို ရွေးပါ။ စာသားတွေ အားလုံးကို ရွေးပါ။
left indent marker လက်မ၀က်ထက် ပိုပြီး အထဲဝင်အောင် rule ကနေ ရွေ့ပါ။
Skills section က စာသားတွေကို ရွေးပြီး bulleted list ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
အဲသည်စာသားအားလုံးရဲ့ left indent marker ၁လက်မအထိ ရောက်အောင် ruler ကနေ တွန်းရွေှ့ပါ။